Amaqhosha amathathu okusombulula ingxaki yeNtengiso yeTekhnoloji eNkulu | Martech Zone
Rhoqo, itekhnoloji iba sisimntwiso sempumelelo. Ndibe netyala layo, nam. Itekhnoloji kulula ukuyithenga kwaye ke, ivakalelwa njengophuculo kwangoko! Ishumi leminyaka lokuqala lama-2000 lalimalunga nokungena ngaphakathi, ke ngoko sabalekela ukuthengisa oomatshini abaziingalo. Saqhwaba i-blinders xa kufikwa kwisicwangciso kuba icebo lalibonakala licotha; yayingeyonto imnandi.
Ukuthengisa kuya kuthatha isihlalo kwitafile yengeniso nangayiphi na indlela eyimfuneko-yayiyinto yokulwa. Kodwa xa iminyaka iqengqeleka kunye nemilinganiselo ye-ROI ebithenjisiwe ayinakuze ifike, ezo zikhalo ziguqulwe zaba ziinyembezi. Kulula ukulila iMartech xa ujonga imbuyekezo eyivelisayo- ngaphantsi kwepesenti enye kuko konke ukuthengisa okukhokelayo kuguqulela kubathengi okwangoku. Ukusilela okumangalisayo. Kwaye ukuba asizisombululi ngonobangela wale mpawu, umsebenzi wokuthengisa usengozini yokupheliswa, phantse ngaphambi kokuba kuqale.
Kubalulekile ukuba sihlasele le ngxaki kwingcambu, njengoko abathengisi bezobugcisa abaxhaswa ngemali bathambekele ekutshintsheni ityala kwinto eyenza ukuthengwa kwesoftware, njengotshintsho kwindlela yokuziphatha komthengi. Olona tshintsho luyinyani ekufuneka lwenziwe yindlela yentengiso. Ukuze uphumelele kwintengiso, kwaye uphumelele ngokwenene kwishishini, kuya kufuneka unike ingcinga elinganayo nenenjongo kwizinto ezintathu ezilawula loo mpumelelo: iqhinga lakho, itekhnoloji yakho, kunye namaqhinga akho. Kwaye zonke kufuneka zilungelelaniswe, ebhodini.
Ke ikhangeleka njani? Ndiyavuya ukuba ubuzile. Nantsi into endiyithathayo.
Isicwangciso: IDomino yokuqala
Nokuba yeyiphi itayitile yomsebenzi, kuya kufuneka uqonde isicwangciso esiliqili sombutho wakho. Ngokwendlela yokubeka, zeziphi ezona njongo ziphambili zeshishini? Abathengisi, abathengisi, abantu beenkonzo zabathengi… wonke umntu kwiqela lakho kufuneka ayazi impendulo yalo mbuzo ubalulekileyo. Kufanele ukuba ibe yinto yokuqala wonke umntu ayaziyo, ayiqondayo kwaye ayikhathaleleyo. Ukuba oku akuchazwanga ngokucacileyo, buza: Sizama ukufezekisa ntoni? Athini amanyathelo ethu aphambili okukhula? Ngokusengqiqweni, inyathelo elilandelayo libandakanya ukuqonda into onokuyenza mihla le ukunceda ukufezekisa eso sicwangciso sokukhula. Ngamafutshane, yiba lutshintsho ofuna ukulubona kwishishini.
Oku kusebenza ngeenjongo ezimbini:
Ukuqinisekisa ukuba uchitha ixesha lakho usebenza kwizinto ezibalulekileyo.
Ukuyeka ukwenza nantoni na engavumiyo. Kuvakala kulula, kodwa uya kumangaliswa bubungakanani bengxolo ekhoyo kumashishini amaninzi ngenxa yokunqamka okusisiseko phakathi kweqhinga kunye neqhinga. Uza kubona utshintsho olukhulu xa uqala ukusebenza kwindawo yesicwangciso kuqala. Endaweni yokuthengisa ukuba nemincili ngomsebenzi owenziwa kanye-nje, njengokubamba umsitho, kwaye ubaleke nawo ungenanjongo icacileyo emehlweni… uyakuma kancinci. Uya kubuza: Sijonge ukufezekisa ntoni? Sijonge ukubandakanyeka kubani? Kutheni lo msitho endaweni yelinye inyathelo?
Rhoqo siva malunga namashishini e-B2B aphishekela isicwangciso-qhinga sexabiso kubomi babathengi, apho bajolise ekukhuliseni ingeniso kunye nokuzibophelela kubathengi abakhona endaweni yokufumana ezintsha. Umsonto welaphu lombutho wabo uphela kufanele ukuba ube malunga nokuphembelela ukungahambi kakuhle. Xa useta isicwangciso-qhinga sakho, kwaye emva koko usete imephu yendlela ehambelana kwasekuqaleni, uya kuqala ukunkqonkqoza neyona njongo yakho iphakamileyo isihogo ngokukhawuleza okukhulu kunokuba ubuya kwenza ngenye indlela.
Inkqubo: Yenziwe njani iSoseji
Emva kwesicwangciso kuza ukuphunyezwa, kwaye ukukhanya okukhokelayo kokuphunyezwa yinkqubo ecingwe kakuhle. Ukuba isicwangciso-qhinga sakho simalunga nexabiso lokuphila kwabathengi, ngokomzekelo endiwusebenzise apha ngasentla, unokuba ujolise kwi-laser ekuqineni, ekuphindaphindweni kokunikwa amandla kwabathengi kunye nenkqubo yophuhliso lweakhawunti. Uya kuhlahlela indlela yokuthengisa kubathengi bakho abakhoyo kuwo onke amanqanaba okukhula, kwaye wenze imephu kwindlela onokuthi ubaphathe ngayo kuhambo onalo engqondweni.
Umzekelo, emva kokuba umntu ethenga izisombululo zakho- yintoni elandelayo? Apha kulapho ufumanisa ukuba luhamba njani uhambo lwakho lwabathengi. Masithi umthengi uthenga iMveliso X kwaye inyathelo elilandelayo libonelela ngoqeqesho lokuba ungaphumelela njani kuyo. Emva koko kunokuza ukufundisa umthengi malunga nokuba kutheni banokufuna iMveliso Y, kwaye ubalungiselele ukuthengwa nokuphunyezwa kwayo. Xa wenza imephu ngenkqubo ecacileyo kwaye ulungelelanisa iqela lakho elijikeleze yona, kwaye iqhutywa sisicwangciso-qhinga sakho, umthengi wakho uya kulazi ngcono ixabiso lakho. Oku kuthatha injongo kunye nokuzibophelela ekufeni ukugcina isicwangciso sakho siphambili.
Kwaye okokugqibela-isitaki sakho sobuchwephesha (ndiyazi, ubunethemba lokuba siza kufika kule nxalenye). Okokuqala, qaphela ukuba itekhnoloji yakho iza kwindawo yesithathu kolu luhlu. Iseyinxalenye yeqela lamaphupha, kodwa ayisiyiyo umdlali wokuqala. Okwesibini, yazise ngendima efanele ukuyidlala- a inkxaso indima. UJill Rowley, igosa eliyintloko lokukhula eMarketo lidume ngokucinga ukuba:
Isidenge esine sixhobo sisisiyatha.
Ndingayithatha inyathelo eliya phambili kwaye ndiphikise ukuba inyani iba mandundu ngakumbi, njengoko loo mntu ngoku eyi nobungozi isidenge.
Inkqubo engalunganga, enqanyulwe kwisicwangciso, yindlela eqinisekileyo yomlilo yokusilela xa usongeza kwisikali kunye nokuzenzekelayo kwetekhnoloji. Uya kuphuma kude nomkhondo, ngokukhawuleza- kwaye uya kulonakalisa igama lakho. Umlinganiso wakho wendlela esiphumelele ngayo isicwangciso sakho kunye neendlela ekufanele ukuba ziqiniswe yiteki yakho yobugcisa. Iinkqubo zakho kufuneka zifake idatha yakho, ukuze uyihlalutye kwaye emva koko wenze izigqibo ezikrelekrele malunga nokuhlala kwezi zifundo ukuzo okanye indlela echanekileyo.
Ukwenza lo msebenzi, ukuthengisa kufuna umgca ocacileyo wokubona kwamanye amaqonga eedatha zabathengi. Akwanelanga ukuba isebe ngalinye lisebenzise nje iteknoloji; Kufuneka kwakhona yenziwe ngendlela ukuze idatha ikwazi ukugqithela phakathi kwamasebe ngendlela enentsingiselo. Xa uyila iinkqubo zakho ukuze uqinise umkhombandlela weqhinga kunye neendlela zakho, uyandisa injongo yayo. Isenokungabi yinto ekhazimlayo njengokwenza itekhnoloji ibe yinkwenkwezi, kodwa iya kukunceda wenze ngendlela engakumbi kwaye ufumane iziphumo.
Imibutho emininzi engaqondanga iphela ijolise kwelinye lala macandelo mathathu kwaye iyeke eminye emibini iphele kumnyama. Okanye, okubi ngakumbi, bazama ukujongana bobathathu- kodwa ngeesilos. Xa imeko iyenzeka, iqela lakho alimiselwanga impumelelo. Endaweni yoko, unokukhawulezisa ingeniso yakho ngokubeka iqhinga phambili, kulandelwe inkqubo kunye netekhnoloji- kulandelelwano nanjengamacandelo amathathu elinye, iqela elilungelelanisiweyo. Le yindawo emnandi, kwaye apho uya kufumana khona impumelelo ukuthatha imilo- kunye nokukhawulezisa.
tags: ujill rowleyukwenziwa kwentengisoInkqubo yentengisoqhinga urhweboItekhnoloji yentengisouphawumartechisitaki seMartechTechnology
Zithini iiNkcukacha-manani ze-Intanethi zamva nje zika-2018